ngamanqaku alandelayo avela kubathengi kwiblogi yabo. Kuya kukunceda ukwandisa isiseko sakho seesayithi zamaqabane.
Sebenzisa ukubhaliswa kwe-RSS kwiGoogle Reader ukugcina ithrekhi yeeblogi kwi shishini lakho. Yakha iifolda ezahlukileyo kwiwebhusayithi nganye yesihloko. Ukuhlenga le nkqubo, uya kugcina ukuba yeyiphi iindidi ezinezithuba eziye zahlaziywa kutshanje.